Abavelisi boLuhlu lweeMveliso abavelisi-baThengi boLuhlu lweMveliso baseTshayina kunye neFektri
I-Stone Carving yinkqubo yokucoceka kunye nokuchaza imarble yendalo erhabaxa kwipateni yokuhombisa kunye nezobugcisa. Xa kuthelekiswa neentsimbi ze-3D ezingenazintsimbi okanye naziphi na iziqwenga ze-3D ezenziwe ngeekeramiki, iglasi, iplastiki njl. Ngeminyaka yokuqokelelwa kweendlela zobuchwephesha ezidibanisa inkqubela phambili yetekhnoloji ye-CNC, iimveliso zamatye zeCarvings zityhila umtsalane wale mihla kunye nobukhazikhazi bayo obuphezulu be-antique.
I-Marble Inlay iyabandisa ubuhle beemabhile zemarble. Ukwenza isiqwenga esihle semveliso yeemabula, okokuqala kufuneka sibe liqela elikumgangatho ophezulu loyilo kunye nokuzoba ezivenkileni, eli linyathelo lokuqala kodwa elibalulekileyo. Iqela lethu eliqeqeshwe kakuhle nelinamava liqinisekisa ukuba asigcini ngokungenisa idatha kumthengi, kodwa sikwanekhono loyilo, kwaye okwangoku sinikezela ngefoto esekwe kuyilo ukufumana indibaniselwano efanelekileyo yombala kwaye yenze nzulu ukurhweba ngokuthengisa ukuze kulindelwe kwaye imveliso ecaciswe kakuhle. Inqaku lesibini elibalulekileyo ngumatshini we-CNC wamanzi. Umgangatho ophezulu kunye nomatshini ogcinwe kakuhle ungaphaya kwamathandabuzo kwisiseko esomeleleyo semveliso entle kwaye egudileyo. Okwesithathu, umqhubi wethu kwi-jet-jet yamanzi ufundiswe kakuhle kungekuphela nje ekusebenziseni oomatshini, kodwa nakwiimpawu ezahlukeneyo zeentlobo zamatye. Aba basebenzi banoxanduva, ngolwazi olugqwesileyo kunye nokuqonda umsebenzi abawunikiweyo ngabona bantu baphambili kwimveliso egqibeleleyo. Ukufakwa kwimabhile, ukukhetha ukubalwa kwelitye, ukubala kwe-milimetre nganye kwiziphumo zokugqibela.
I-mosaic yeMarble inokulandelwa emva kwiminyaka eliwaka eyadlulayo kwimbali yomhombiso womntu. Umsebenzi wayo kukwandiswa kweengcinga zabantu. Inokuphila njengentombazana; kunokuba njengodidi lobudala boMhlaba; kwaye inokuba buthathaka njengepeyinti kaDa Vinci. Ukuhamba ukusuka kwixesha elidlulileyo ukuya kule mihla, kudlula kwilifa lenkcubeko nomoya wabantu, kwaye kule mihla, iseyenye yezona mveliso zithandwayo ngabaqulunqi kunye nabasebenzisi bokugqibela.
I-Stone Carving yinkqubo yokucoceka kunye nokuchaza imarble yendalo erhabaxa kwimilo yokuhombisa nobugcisa. Ukuthelekisa iziqwenga zentsimbi zentsimbi ze-3D zale mihla okanye naziphi na ezinye iziqwenga ze-3D ezenziwe ngeekeramiki, iglasi, iplastiki njlnjl. Ngamawaka eminyaka yokuqokelelwa kweendlela zobugcisa ezidibanisa inkqubela phambili yetekhnoloji, iimveliso zamatye zeCarvings zityhila umtsalane wale mihla kunye nobukhazikhazi bayo obuphezulu.